Helitaanka talaalka degmada King County - King County
Helitaanka talaalka degmada King County
Talaalka dhalinyarada Hubinta xaqiiqada Sualaha Had iyo Jeer Lays Weydiiyo Talaalka COVID-19
Tallaalka COVID-19 marwalba waa bilaash. Qofkasta da'da 5 ama ka weyn waa qaadan karaa tallaal. Da'ooyinka 5-17 waxay qaadan karaan Pfizer oo KELIYA, Da'ooyinka 18+ waxay qaadan karaan Pfizer, Moderna ama J&J.
Caawinta Taleefanka Waa La Heli Karaa
Haddii aad u baahan tahay tarjumaad luqadeed ama caawimaad khadka tooska ah, khadka taleefan ee soo socda ayaa la heli karaa. Fadlan sheeg luqadda aad doorbideyso markii lagugu xirayo:
Khadka telefoonka Caawinta Gobolka WA ee COVID-19: 1-800-525-0127 ama 1-888-856-5816 (ka dib riix #), 6am - 10pm Isniinta, 6am - 6pm (Talaado - Axad)
King County COVID-19 Xarunta Wicitaanka: 206-477-3977, 8am - 7pm
Haddii aad leedahay naafanimo oo u baahan tahay caawimaado aad ku heshid tallaalka COVID-19, fadlan lasoo xiriir 206-477-3977 (8am-7pm, caawin luuqad waa diyaar) ama publichealthaccommodations@kingcounty.gov.
Warbixin ku saabsan sida joogtada ah cusboonaysiiska sida talaalka loo helo. Waxaan ku shaqeyneyna sida loo heli laha cusbooneysiiska oo turjuman oo sida ugu dhaqsahaha badan, lakin waxa jiri kara dib u dhac ay ugu wacan tahay turjumada iyo ku soo bandhigida bogga. Waad ku mahadsan dulqaad kaaga.፡
Cusbooneysiiska ugu dambeyey iminkadan waa English kingcounty.gov/vaccine.
Sidee loo heli kara talaalka
Tallaalku waa bilaash waana diyaar ayadoon la fiirineyn ceymis, sharciga qofku haysto ama xaaladda imigereyshinka. Tallaalka ma laguu biilgareyn doona ama wax laguuguma dalici doono.
Waxaad ka qaadan kartaa irbadda labaad ee tallaalka Moderna ama Pfizer goobaha inta badan, xattaa hadaad ka heshay irbaddii koobaad goob kale. Fadlan keen kaadhkaaga ama sawir kaadhkaaga tallaalka irbaddii koobaad.
Sida loo qabsado Ballanta Talaalka COVID-19
Su'aalaha Badanaa La Isweydiiye ee Tallaalka COVID-19 ee Lagu qaato Guriga
Waxa aad soo qaadanayso iyo sida loo tago ballantaada
Waxaad u baahntahay inaad horay usoo qaadatid:
Aqoonsiga taariikhda dhalashada: gobolka, qabiilka, ama aqoonsi ay soo saartay federaalka. Biil ama ogeysiis bangi oo leh magacaaga iyo cinwaankaaga sidoo kale waa la isticmaali karaa.
Xidho gacmo-gaab ama gacmo-furan oo si fudud isu rogi kara si aad uga tallaasho cududdaada sare.
Oggolaanshaha dadka qaangaarka ah ee idman: Haddii aad ka yar tahay 18 sano jir, waxaad u baahan kartaa oggolaansho qof weyn oo idman si laguu tallaalo. Waad isku saxiixi kartaa naftaad ahantaada haddii mas’uul iska tahay, ama aad guursato qof weyn, ama goobta tallaalku ay go'aamiso inaad tahay qof yar oo qaangaar ah (Ingiriis ahaan). Dhammaan goobaha tallaalku ma sameyn karaan go'aanno ah waa kuma kuwa yaryar oo qaan gaar ah. Macluumaad dheeraad ah oo loogu talagalay carruurta iyo dhalinyarada, oo ay ku jiraan qeexitaannada qaangaarka ee qaangaarka ah, ayaa lagu soo daray halkan. Haddii qof weyn oo idman uusan kula soo xaadiri doonin ballanta tallaalka, ka hubi bixiyaha tallaalkaaga wixii ku saabsan shuruudaha muujinaya caddaynta oggolaanshaha qaangaarka idman ama inaad haysatid xorriyadda sharciga.
Sida loo tago Halkaas:
Haddii aad ku nooshahay King County oo aad u baahan tahay gaadiid aad si aad u tagto ballanta tallaalkaaga, waxaa jira fursado badan:
Raadi Gaadiid: Wixii ku saabsan gaadiid, barnaamijyada tabarucaada, iyo qorsheynta safarkaaga, booqo http://www.findaride.org (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya). Wixii su'aalo u qalmida iyo macluumaad dheeraad ah, booqo http://www.findaride.org/covid (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya).
Lyft iyo Uber waxay bixinayaan raacitaan bilaash ah oo ku geenaya hadana kaa soo qaadaya xarumaha talaalka. Waxbadan ka baro barnaamijka Lyft’s program (af Ingiriis) iyo Uber’s program (af Ingiriis) .
Adeega baska: King County Metro waxay bixisaa xulashooyin gaadiid oo badan si aad u tagto ballamada talaalka, oo ay kujiraan safarka baska, Paratransitka Access, iyo gawaarida bulshada. Ka baro waxbadan oo ku saabsan ikhtiyaarrada safarka ee 'King County Metro' halkan ama wac 206-553-3000.
Ogsoonow, goobaha tallaal ee lagu dhex wado ma qaadi karaan macaamiisha socodka oo waxay u baahan yihiin baabuur ama gaari, sidaa darteed gaadiidka dadweynaha ma noqon doono ikhtiyaar wanaagsan goobahan. Ka hubi faahfaahinta helitaanka bixiyaha tallaalka ka hor ballantaada.
Ma leedahay Medicaid ama Kaarka Apple Health? Ka wac Hopelink Medicaid 800-923-7433 (hubi u qalmitaanka)
Ma tahay qof da' weyn mise tahay naafo? Ka wac Metro Access 206-205-5000 (hubi u qalmitaanka).
Ma waxaad isku dayeysaa inaad ballan u sameyso gaadiidka dad badan? Buuxi foomkan (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya) xubin ka tirsan kooxda Hopelink Mobility Management ayaa kula socon doonta adiga.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad taleefan ama tarjumaad, ka ka wac Khadka Caawinta Tallaalka Laysku duway lambarka 425-943-6706 Isniinta - Jimcaha inta u dhexeysa 8:30 AM - 4:00 PM oo riix 5 si aad u hesho caawin dhanka luuqadda ah.
Waxa la sameeyo tallaalkaaga ka dib
Ballan labaad sameesoa
Haddii aad qaadanayso tallaal 2-jeer, ballan ka sameyso tallalka labaad ballantaada tallaalka ka dib marka aad hesho talaalka koowaad. Waa inaad qaadataa talaalkaada labaad 21 maalmood (Pfizer-BioNTech) ama 28 maalmood (Moderna) kadib talaalka koowaad kadib. Qiyaasta labaad waxay ka bixin doontaa difaac buuxa fayraska.
Uma baahnid qaadasho labaad ee tallaalka Johnson & Johnson ee COVID-19 - hal tallaal ayaa bixiyo difaac buuxa.
Saxiix u samee V-safe
Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) waxay abuureen aalad, V-safe (Bogan wuxuu ku qoran yahay English keliya), si loola socdo badbaadada tallaalka. V-safe waa aalad ku saleysan taleefannada casriga ah oo adeegsata farriimaha qoraalka iyo sahaminta websaydhka si ay u bixiso baaritaanno caafimaad oo shakhsi ahaaneed ka dib markaad hesho tallaalka COVID-19. Si dhakhso leh ayaad ugu sheegi kartaa CDC haddii aad leedahay waxyeellooyin soo raaca ka dib qaadashada tallaalka COVID-19. CDC ayaa kula socon doonta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. V-safe waxay sidoo kale ku xasuusin doontaa inaad hesho talaalkaada labaad ee tallaalka COVID-19, haddii loo baahdo.
Waxa laga qabto waxyelooyinka tallalka
Hadii aad isku aragto xasaasiyad daran,wac 9-1-1 ama aad isbitaalka kuugu dhow. Wac daryeel cafimaad bixiyahaaga hadii aad isku aragto waxyelooyin kale oo dhib kugu haya ama aanan baxeyn.
U soosheeg waxyelooyinka tallalka nidaamka ka warbixinta waxyeloyinka daran ee tallalka ee FDA/CDC (VAERS) . Ka wac lambarka VAERS halkan 1-800-822-7967 ama interneetka ku dhiib warbixintaada halkan https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. (websaytkan waa ingiriis keliya) Ku xus magaca tallalka aad heshay sadarka kowaad ee sanduuqa #18 ee foomka warbixinta.
Sii wad taxaddarrada COVID-19
Ilaa aad si buuxda uga tallaalayso (laba toddobaad kadib qaadashada cirbadda labaad), waa muhiim inaad ilaaliso kuwa kale. Sii wad inaad xirato maaskarada, xaddid howlaha ka baxsan guriga, iska ilaali meelaha dadku ku badan yihiin, xiriirka dadka kale ka dhig mid gaaban oo fog, hagaaji hawo soogalitaanka gudaha guriga, iyo in badan gacmahaaga dhaq.
Warka fiican waxuu yahay in marka aad si buuxda isku tallaasho, aad bilaabi karto inaad waxyaabo badan dib u qabato mar labaad kuwaasoo joogsaday cudurka faafay awgeed.
Marka si buuxda laguu tallalo
Dadka waxaa lagu tiriyaa in ay si buuxda u tallalanyihiin :
2 todobaad ka dib taxanaha labaad, marka tallalku uu labo taxano ka kooban yahay, sida tallalada Moderna ama Pfizer AMA
2 todobaad ka dib tallalka halka mar ah,sida tallalka Johnson & Johnson.
Hadii laga joogo wax ka yar 2 todobaad tallalkaada,ama wali kuu dhiman yahay taxanaha labaad, MA AHA in aad si buuxda u ilaalsantahay.Sii wad inaad qaadato dhamaan talaaboyinka ka hortaga ilaa aad si buuxda u heshid tallalka.
Dadka si buuxda loo tallaalay waa inay ka feejignaadaan waxyaabaha soo socda:
Amarka maaskarada ee gobolka Washington wuxuu u baahan yahay qof walba inuu xirto waji-daboolka meelaha qaarkood, oo ay ku jiraan iskuulada iyo daryeelka carruurta, daryeelka caafimaadka, goobaha adeegga hoy la'aantu, goobaha dhaqan celinta iyo gaadiidka dadweynaha.
Xitaa dadka la tallaalay waa inay wajiga xirtaan meelaha dadweynaha ee gudaha ah iyo goobaha bannaanka ee dadku ku badan yihiin si looga hortago faafitaanka COVID-19.
Haddii aad dooratid inaad safartid (gudaha ama caalamkaba), weli waad u baahan tahay (Raac tilmaamaha CDC ee Socdaalka) follow CDC travel requirements.
U fiirso astaamaha COVID-19, gaar ahaan haddii aad ag joogtay qof jiran. Haddii aad leedahay astaamaha COVID-19, iska baar oo gurigaaga ka joog oo ka fog dadka kale
Hadii aad u dhawaatay qof qaba COVID-19, 3 maalmood ama in kabadan kadib iska soo baar COVID-19, ka fogow dadka kale oo la soco calaamadaha 2 toddobaad. Waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad is karantiisho, haddii aadan lahayn astaamo. Akhriso go'doomintayada iyo hagida karantiilka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Raac tilmaamaha goobtaada shaqada. Loo-shaqeeyayaasha iyo ururadu waxay codsan karaan ama u baahan karaan caddeyn tallaal si ay uga qaybgalaan dhacdooyinka ama ugu noqdaan shaqada. U waafajin macquul ah ayaa looga baahan yahay kuwa naafada ah ama sababo kale oo aan qof la tallaali karin.
Hagaajinta tayada hawada gudaha, iyada oo loo marayo hawo fiican iyo sifeyn, waxay muhiim u noqon doontaa in dhammaanteen laga wada ilaaliyo COVID-19. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa Hagaajinta Hawada Gudaha.
Xitaa dadka la tallaalay waxay dooran karaan inay ku sii socdaan waji daboolka goobaha dadweynaha. Qaar ka mid ah dadka la tallaalay waxay dooran karaan inay sii wataan waji dabool haddii ay khatar sare ugu jiraan infekshin daran, ay yeeshaan xaalad caafimaad oo hoose, ama ay xiriir dhow la leeyihiin qof halista u sii kordhaya. Kuwa kale waxay dooran karaan inay sii wadaan inay xirtaan maaskaro si ay u taageeraan waji dabool ay xirtaan dadka aan la tallaalin ama sababta oo ah waxay dareemayaan raaxo badan inay sidaas sameeyaan. Dadka qaarkiis sidoo kale waxay xirtaan maaskarada si ay iskaga difaacaan cudurada kale ee neef mareenka ama xasaasiyadaha.
Waxaan wali baaraynaa waxtarka tallaladu ee xaga kahortagitaanka faafida COVID-19 la socodsiintana way socotaa. Eeg websaydhka CDC si aad u hesho tilmaamihii ugu dambeeyay ee loogu talagalay dadka si buuxda u tallalan. (websaytkan waa ingiriis keliya).
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan carruurta iyo dhalinyarada
Waxbadan ka baro talaalka dhalinyarada, ooy ku jiraan shuruudaha ogolaanshaha, at kingcounty.gov/youthvaccine/somali.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dadka waaweyn
Halkee laga heli karaa tallaallada hadda?
Xarumaha Daryeelka Muddada-dheer, dadka deggan guryaha dadka lagu xannaaneeyo, nolol caawimaad leh iyo qaar kale oo ka mid ah xarumaha daryeelka muddada-dheer ayaa qaata tallaalka goobta iyadoo loo marayo iskaashi qaran iyo silsilado farmashiye.
Nidaamyada Daryeelka Caafimaadka, oo ay ku jiraan dhakhaatiirta, isbitaalada, iyo rugaha caafimaad ee bulshada, ayaa ah habka ugu muhiimsan ee inta badan dadka waaweyn ee ku nool King County ay u heli karaan tallaal.
Kooxaha Tallaalka Guurguura, oo ay iska kaashanayaan Caafimaadka Dadweynaha iyo Waaxyada Dabka ee deegaanka ayaa gaaraya dadka waaweyn ee ugu halista badan, oo ay ku jiraan kuwa ku nool Guryaha Qoyska ee Dadka Waaweyn iyo tas-hiilaadka waayeelka ee la awoodi karo.
Goobaha Tallaalka Volume-ka sareeya, oo ay isku dubariday Hay'adda Caafimaadka Dadweynaha, ayaa waxay gaarayaan kooxo ku sugan koonfurta King County oo leh heerar sare oo isbitaal dhigid iyo geeri ka timaadda COVID-19, oo ay ku jiraan dadka waaweyn iyo shakhsiyaadka aan madax-bannaanida u noolaan karin, iyo daryeelayaashooda.
Farmashiyada: Sida tallaalka hargabka ee farmashiyaha xaafaddaada, silsilado badan oo farmashiyeyaal ah - oo ay ku jiraan dukaamada cuntada - waxay leeyihiin ballamo tallaal oo COVID-19 ah.
Rugaha Caafimaadka ee diimaha ama Bulshada Ku Salaysan: Goobaha cuntada, xarumaha waaweyn, iyo ururada diinta ku saleysan ayaa tusaale u ah halka lagu qorsheynayo rugaha caafimaad ee pop-up, isla marka la helo qiyaaso.
Tallaalka Guriga waa ikhtiyaar loogu talagalay dadka waaweyn ee guryaha aan kasoo bixi karin. Kooxaha talaalka wareega iyo daryeel caafimaad bixiyeyaasha idman ayaa samayn doona booqashada guryaha
Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/somali